Best iPhone Photo Manager | Jikwaa iPhone Photos
"Ọ onye ọ bụla nwere ihe ọ bụla bara uru iPhone foto faili ka nwere ike ikwu? Nnọọ ike-adabere na iTunes jikwaa photos na m iPhone 5. Ọ nkụda mmụọ iji iTunes ka mmekọrịta photos. Abaghị uru!" - Michael
-Eme ihe n'eziokwu, iTunes bụ n'ezie a ezigbo ngwá ọrụ jikwaa iPhone videos na music. Otú ọ dị, mgbe ọ na-abịa ijikwa foto na iPhone, ọ bụghị otú ukwuu. N'ezie, ọ na-ahapụ gị mmekọrịta foto site na kọmputa na-iPhone, ma ọ kọrọ ihe ndị kasị ibubata atụmatụ iPhone ọrụ mkpa: ebufe foto site na iPhone na kọmputa maka ma ndabere ma ọ bụ n'ihu edezi, ka naanị ihichapụ foto ma ọ bụ na-eke foto albums. Nke ahụ bụ ihe a ọkachamara iPhone foto faili kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị chọrọ onye iPhone Photo manịja Windows, m na-atụ aro ị na-agbalị Wondershare TunesGo Ochie. Ọ bụ n'ezie mma na ijikwa iPhone photos.
Gbalịa mee ihe ndị kasị mma iPhone Photo ufene - Wondershare TunesGo Ochie
Wondershare TunesGo Ochie na-haziri karịsịa maka iPhone ọrụ jikwaa faịlụ na iPhone. Ọ na-ahapụ gị mbupụ iPhone photos, mbubata na ihichapụ foto, ike na-ewepụ foto albums anya. Ndị na-esonụ Ama bụ banyere otú iji TunesGo Ochie jikwaa iPhone photos. Dị ka ị na-ahụ, TunesGo Ochie (Mac) dị kwa. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị nwere ike na-agbalị ya jikwaa iPhone foto na Mac.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na PC
Download, wụnye, na ẹkedori TunesGo Ochie na gị Windows PC. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na Windows PC (Windows 8 dabeere PC gụnyere). Jiri gị iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone na PC. TunesGo Ochie ga-amata gị iPhone ma na-egosi ya na isi window.
Cheta na: Iji jiri TunesGo Ochie jikwaa iPhone photos, ị kwesịrị ị na wụnye iTunes na kọmputa gị mbụ.
Nzọụkwụ 2. Jikwaa iPhone photos
Pịa Photos na n'aka ekpe nke isi window ikpughe Igwefoto Roll, Photo Library na foto albums. Ugbu a ị na-eru nke ijikwa iPhone photos mfe.
Export Photos na foto album na kọmputa;
Nyefee foto site na kọmputa na-iPhone;
Hichapụ iPhone Photo Library photos;
Hichapụ foto na iPhone Igwefoto Roll;
Mepụta foto album on iPhone;
Hichapụ Photo albums si iPhone;
Gbalịa iPhone Photo Manager - Wondershare TunesGo Ochie ugbu a!
Cheta na: The Mac version - TunesGo Ochie (Mac) nwere ike ghara ihichapụ foto na igwefoto Roll si iPhone nke na-agba na iOS 6 ugbu a.
Na-ekiri ndị Video nyefee Ndi ana-akpo ka iOS 7 Devices
Olee otú idozi Sound na iPhone
10 Ugbu akpa ọchị Songs eme ka ị na-eche dị ka A onyeisi
> Resource> iPhone> Best iPhone Photo Manager jikwaa iPhone Photos